Obianọ Enwogharịala Ngalaba Ọrụ Ugbo n'Anambra —Onukwuba | Igbo Radio
N'ịgbaso nke a, a kọwaala aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ dịka onye tigoro ịgba dara ụda na ngalaba ọrụ ugbo steeti ahụ, ma wetekwa mgbanwè na mnwògharị pụtara ìhè na ngalaba ahụ, nke mezịrị ka ọrụ ugbo na-amị akpịrị na steeti ahụ.
Nke a bụ nke e kwupụtara site n'ọnụ Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo na steeti Anambra, bụ Maazị Nnamdị Onukwuba, n'okwu ya n'ihe mmemme ndị nta akụkọ a kpọrọ 'Meet the Media', bụ nke weere ọnọdụ n'Awka.
Dịka o siri kwuo, a na-agbakụtabụ ọrụ ugbo azụ n'oge mbụ n'ime steeti ahụ dịka nke dịịrị naanị ndị okenye na ndị bi n'ime obodo; mana ugbua, ọ bụzị ihe na-amị onye ukwu na onye ntà akpịrị, n'ihi ihe dị iche iche ọchịchị Gọvanọ Willie Obianọ megoro na ngalaba ahụ kemgbe ọ batara n'ọkwa ọchịchị.
O mere ka a mara na ndị ọrụ ugbo steeti ahụ na-enweta mkpụrụ akụkụ ọrụ ugbo n'efù site n'aka gọọmenti iji belatara ha ego ha na-emefù n'ịkọ ugbo, ebe gọọmenti na-ejikọkwa aka ọnụ, ya na ụfọdụ ụlọọrụ gọọmenti na òtù nnọrọonwe dị iche iche iji guzobe ihe dị iche iche na-enye aka n'ịkọ ọrụ ugbo isucha na ichekwaba ihe a kọtara n'ugbo, iji hụ na ha emebighị maọbụ laa n'iyi. Ọ sị na nke ahụ na-enyekwa aka ime ka e nwee nri gbaanyụụ n'ime steeti ahụ site n'ahọ ruo n'ahọ, ma kwalitekwa ọnụego a na-enweta n'ịkọ ọrụ ugbo.
N'ihe gbasaara ịkọ Ugbo Azụ Ụnọ, Maazị Onukwuba kọwara na ya bụ atụmatụ e wepụtara site n'aka Gọvanọ Willie Obianọ emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee ugbo ebe ha kọrọ ihe ugbua, ebe ọtụtụ sitegokwara na ya wee tinye isi na ngalaba ọrụ ugbo, n'ịza ọkpụkpọ oku 'Kọọ Ugbo Azụ Ụnọ' ahụ Gọvanọ Obianọ kpọrọ.
Oge ọ na-eme ka a mara na gọọmenti na Anambra na-atụ anya imepụta osikapa ruru metrik tọn narị puku anọ na iri asaa na ise (475,000) n'ime ahọ a; ya bụ Kọmishọna gara n'ihu kọwaa na gọọmenti steeti ahụ enyela ma ka na-enye ọtụtụ ndị ntorobịa na ụmụnwaanyị steeti ahụ ọzụzụ na nkwàdo n'ụzọ dị iche iche, ma na ngalaba ọrụ ugbo, ngalaba ọrụ aka, ngalaba azụmahịa, na ngalaba ndị ọzọ dị iche iche.
Dịka ọ na-echetara Ndị Anambra na ihe niile agbanwechagokwa ugbua, Kọmishọna Onukwuba gara n'ihu kpọpụtasịa uru na ọtụtụ ohere ọma dị iche iche juru na ngalaba ọrụ ugbo na steeti ahụ ugbua, ma kpọọ òkù ka onye ọbụla gharakwa ikwe ka ụgbọ ghàá ya, maka na ọchụpụrụ onwe ya n'ụgbọ apụghị ịsị na ụgbọ eruteghị ya.